राष्ट्रिय समाचार :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
राष्ट्रिय समाचार लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको बैठक बस्दै
५ जेठ, काठमाण्डौं । एकिकृत माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्ड संयोजकत्वको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । माओबादी केन्द्रिय कार्यालय पेरिशडाँडा कोटेश्वरमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा संविधानसभा चुनावमा गर्ने मोर्चाबन्दी, निर्वाचन कानुनमा देखिएका...
५ जेठ, काठमाण्डौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्बाचन प्रक्रियाको बिरोधमा रहेका दलहरुसंग आज बार्ता शुरु गर्दैछ । सरकारको विपक्षमा रहेका र नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनका विपक्षमा रहेका नेकपा-माओबादीसहित विभिन्न ३३ दलसँग समितिले छलफल गर्ने...
४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले उर्मिला अर्यालको एमाओवादी प्रवेशलाई हरियो रुखबाट एक-दुई पहँलो पात खसेको संज्ञा दिनु भएको छ ।
कपनमा शनिबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेता ओलीले जति खाँदा...
४ जेठ, काठमाडौं । कार्यकर्ताले सामूहिक नेतृत्वको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि राजधानीमा जारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको एकता महाधिवेशनको बन्दसत्र प्रभावित भएको छ ।
बन्दसत्रमा परशुराम खापुङले आलोपालो नेतृत्व गर्ने प्रस्तावसहितको विधान संशोधनको...
भाषा, संस्कृती, हिमाल, ताल, रहन-सहन मात्र नभएर ऐतिहासिकरुपले पनि पश्चिम नेपाल महत्वपूर्ण रहेको छ । पर्यटकीय सम्भावना मात्र नभएर पर्यटक स्थलहरु प्रचुर मात्रामा भएर पनि पर्यटकीयस्थल बन्न सकिरहेका छैनन् । न पश्चिम नेपालमा राज्यको...
कोठाभरि पहेंलो बस्त्र । सिटिङ रुममा बेतको टेवलमाथि पनि पहेंलै कपडाको टेबलपोस । छेउमा किताबका खात । एउटा जोगीको घरमा यो भन्दा बढी के नै पो हुन्छ र ! न श्रीमती, न छोराछोरीको होहल्ला...
४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले थ्रेसहोल्डको अडान नछाड्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा शनिबार कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले एमाओवादी चुनाव हुन नदिन लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो ।
४ जेठ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले थ्रेस होल्ड खारेजका लागि दबाव दिइरहेका बेला माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने थ्रेसहोल्डको समर्थन गर्नु भएको छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभए दलीय राजनीतिमा दुरगामी नकारात्मक असर पर्ने...
४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले एकीकृत माओवादीले चुनाव नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले एमाओवादी चुनाव भाड्न र टार्न खोजिरहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनु पर्ने वताउनुभयो ।
नेकपा एमाले उपत्यका पेशागत...
४ जेठ, विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभा निर्वाचन अब कसैको अवरोधबाट नरोकिने बताउनुभएको छ । खनालले मुलुकको अहिलेको समस्याको एक मात्र समाधान निर्वाचन भएको वताउनुभयो । मोरङको विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार विहान...
‘मातृ संभोग’ नामक उपन्यास लिएर नेपाली साहित्यको बजारमा देखा परेका स्वागत नेपालको अर्को उपन्यास आएको छ, जिगोलो । लेखकले यसलाई राजनीतिक वैश्यावृत्तिमा आधारित उपन्यास भनेका छन् । शनिबार राजधानीमा विमोचन हुँदै गरेको जिगोलोको एक...
गर्मीले 'सेन्डो' छिचोलेर सर्ट नै भिजेछ ! डोरीमा टाँगे । मुढामा बसेर जुत्ताका लेस खोल्दै गर्दा बाटोमा देखियो घने, साइकल डोर्‍याउँदै । सुपारीको बोटमा साइकल अड्यायो र कन्चटमा औँला घुमाउँदै भन्यो, 'थाहा पाइस्, बलेको...